opharetha bamaselula njalonjalo kumakhasimende ayo ezihlukahlukene ewusizo futhi akuyona inketho ngempela. Ngokwesibonelo, angenamkhawulo ukufinyelela internet. Futhi inkampani "MTS" iyathinteka. Le sevisi ewusizo ngokuthi "MINIB" Ngeshwa, akuyona yonke meet. Uma kuba lula ukuxhumana ke ukulahla yinkinga. Njengoba vimbela "MINIB" ukuze "MTS", uma asikho isidingo usebenzise inketho?
Okokuqala udinga ukwazi ukuthi le sevisi likhona iphakethe odlule ngokushesha. Sasingekho isidingo ukuxhuma ngokwakho. Lisho ukuthini igama elithi enkonzo? Ngokwesibonelo, une isidingo ukusebenzisa i-Inthanethi ngefoni yakho, kodwa ngohlelo lwakho lwedatha akuyona ukonga kakhulu kulokhu. Isevisi "MINIB" ikuvumela ukusizakala World Wide Web ngentengo encishisiwe. Kulokhu, inkokhelo izokhishwa emini ukuthi usebenzise i-Internet kuphela. Lokhu kusho ukuthi ngeke ukhokhiswe imali ngenyanga isevisi nsukuzonke. eyodwa kuphela ngosuku ukusetshenziswa. Kodwa, ngeshwa, awukwazi ukwenza ngaphandle downsides. Ngokwesibonelo, abaningi bakhononda ukuthi inkokhelo yenziwa kaningi kakhulu, yize isevisi alisetshenziswa, noma kancane kakhulu yesivinini sokuxhuma. Indlela ukukhubaza "MINIB" ukuze "MTS", uma asikho isidingo kule inketho? It kuncike esifundeni uhlala endaweni yokuqala. Kwezinye izindawo, isevisi isatholakala uxhumano kanye nokusetshenziswa. Kodwa kukhona izindawo lapho ukhetho kuphela labo ababhalisile Uxhuma yona inombolo ethile. Futhi-ke, ixhume kakade ngeke ngemva kokuwusebenzisa. Cabanga ukuthi unawo ngempela evimbela lokhu kukhetha? Phela, kungenzeka ukuthi i-Internet iyithuluzi wusizo kuwe umusa kwabanye esasibucayi.
Kunezindlela eziningana ukukhubaza "MINIB" ukuze "MTS". Krasnodar esifundeni kanye Adygea Republic, kanye nezinye izifunda isiRashiya, ungazuza ehhovisi yangasese at website yenkampani esemthethweni, ukukhetha indawo yokuhlala kunesidingo. Okulandelayo udinga ukufaka inombolo yakho yocingo futhi iphasiwedi ekhethekile. Ungakwazi bese uyikhipha noma ukuxhuma ngokuphelele yimuphi ezihlinzekwa opharetha mobile. Ku-akhawunti yakho siqu, ungakwazi ukubuka izindleko zakho zokuxhumana, xhumana Inthanethi Umsizi, ufunde mayelana izindaba endaweni abahlala ngokuba "MTS". Kungenzeka ukuthi isici esisha abanye uzoba yiyo. Ngaphezu kwalokho, indlela elula ukulandelela izindleko zakho, bhala-offs ngesikhathi sangempela. Ulwazi olusha kanye ngomzuzu ekhasini. Ungakwazi ukuxhasa akhawunti yakho ku-akhawunti yakho e indaba ngemizuzwana. inombolo opharetha endaweni yakho, ungathola okufanayo kuthebhu.
Uma usebenzisa i-akhawunti yakho ayisebenzi, ungazama ngenye indlela. Shayela i-opharetha, isibonelo. Noma faka ikhodi elifushane, okuzokwenza ukhubaze isevisi. Esikhathini Krasnodar Territory kuyinto * 111 * 62 #. Ngaphezu kwalokho okudingeke ukuba ucindezele inkinobho ucingo (kwihendisethi ngokuvamile esiluhlaza ikhiphedi ngocingo noma ukubonisa). Ngemva kwalokho, ngaphambi kokuba uzobe imenyu yokuqukethwe lapho ufuna into №2 (yena icishe "MINIB"). Isevisi izovalwa emini. Ungase futhi uthumele umlayezo ukhululekile opharetha enombolweni "111". SMS - 620. Lapho kufanele uthole isiqinisekiso sokuthi isevisi ikhutshaziwe ngempumelelo. Uma kungaqali, uzame futhi ukuqinisekisa ukuthi balahle inketho.
Republic of Bashkortostan, futhi, okungazange kube okungenamiphumela ngayo le sevisi. Okwamanje, it is hhayi kufakwe uhlelo tariff, esikhundleni zanamuhla. Kodwa labo ababhalisile Sekuyisikhathi eside ababezijabulisa SIM khadi yakho ingase ukubhekana nesidingo ayibulale. Kanjani? Indlela ukukhubaza "MINIB" ukuze "MTS"? Ufa (Republic of Bashkortostan) kanye nesifunda, kanye nezinye izifunda, ungakwazi ukuqeda le ongakhetha zaphela. Kuyinto kudingekile kuphela ukuze zisebenza "MTS" mobile salon futhi wenze isicelo. Ngokuzimela Ungase futhi uthumele i-SMS kule nombolo opharetha 111. Umlayezo siqukethe izinombolo ezine - 6200. Ngemva kwalokho kufanele sondela qinisekisa ukuthi ukhetho lukhubazekile.
Ufa kanye nesifunda
Esikhathini Sverdlovsk esifundeni kusadingeka ababhalisile abasebenzisa inkonzo, yize ivalwe ukuxhuma ngalesi sikhathi. Indlela ukukhubaza "MINIB" ukuze "MTS"? EYekaterinburg (Sverdlovsk esifundeni) has izindlela ezimbili kuphela yokuxazulula le nkinga: usebenzise isayithi esemthethweni futhi umsizi-intanethi, noma uthumele i-SMS enombolweni iDemo. Thumela khulula, kungakhathaliseki kulokho isifunda okuso (ekhaya noma kuzula). Standard Igumbi opharetha - 111. Umlayezo: 6200. Uma isevisi icishiwe, uzothola isiqinisekiso ngesimo umyalezo.
Indlela ukukhubaza "MINIB" ukuze "MTS"? Samara iVolga engena endaweni Ukusabalala. Isevisi ivaliwe nge-Internet kwi website esemthethweni, ngokusebenzisa opharetha, noma ngokuzimela ngokusebenzisa imenyu yengqikithi. Ukuyibiza, uhlobo efonini yakho ephathekayo * 111 #. Ngemva kwalokho kudingeka "Amasevisi" Into. Ungase futhi kungasebenzi isevisi esebenzisa umlayezo omcane inombolo 111. Umbhalo ejwayelekile: 6200. Uma bazisise ingafiki phakathi ngosuku, sicela ubheke i-umsizi-intanethi ku-indawo esemthethweni inkampani "MTS" esifundeni "Samara futhi esifundeni." Umphathi ubhekane ngokuphumelelayo nenkinga yakho e indaba ngemizuzwana.
Inketho "MINIB" iyatholakala uxhumano, futhi ukuvala ku Saratov esifundeni. Futhi uma ungenawo kusebenze amasevisi sizodingida imibuzo, bese enika it up kungabangela umjuluko. Okokuqala, ingabe ngaso sonke isikhathi ngesikhathi mayelana nendlela ukukhubaza izaziso. Uma uthumela i-SMS inombolo 111 anombhalo "6200", isevisi ngeke isasebenza, kodwa hhayi ngokushesha. Kungase kuthathe isikhathi esithile. Okwesibili, ngaphambi ucisha "MINIB" ukuze "MTS" (Saratov nesifunda), udinga ushayele u-opharetha futhi uthintane. Uzodinga ucacise inombolo yocingo kanye negama lomnikazi SIM khadi, bese unqamula isevisi. Lolu khetho kukunikeza 100% isiqinisekiso sokuthi ukhetho izovalwa ngokushesha.
Esikhathini laseStavropol esifundeni isevisi "MINIB" Okuningi ayitholakali uxhumano. Kodwa uma uba umnikazi wayo kuze July 15, 2013, imigomo yesevisi kuwe akukashintshi, ngokuvumelana inkontileka. Indlela ukukhubaza "MINIB" ukuze "MTS"? LaseStavropol Territory (kuhlanganise Yonke imizana esifundeni), kanye noma yisiphi isifunda Russian kungase ngokuzithandela ukulahla isevisi eziphoqelelwe. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuthumela i-SMS "6200" inani. Le khodi kungasebenzi isevisi. inombolo opharetha - 111. Ngemva kwesikhathi okufanele sehlele isaziso sokuthi ukhetho ikhutshaziwe ngempumelelo. Uma kungaqali, ungaxhumana mobile salon "MTS" ukuba ngumxhumanisi usizo.
Kungani inkonzo siphelelwe yisikhathi
Naphezu kwazo zonke lezo zinzuzo, okukhethwa kukho, kukhona kusimo enkulu, okwenza engaphiwanga kangaka, ukuthi iningi ezifundeni Russian kakade ayishiya. Yini? Little traffic. Izinga Ubude nsuku zonke, onikeza kukhetha-10 MB. Yiqiniso, kungaba okwanele ukuze ubone imeyli, isibonelo, noma ukulanda iculo elilodwa noma amabili, kodwa hhayi ngokwanele ukusetshenziswa evamile ye-Internet. Kungenxa yokuthi lokhu abantu abaningi uyazibuza mayelana nendlela ukukhubaza "MINIB" ukuze "MTS". Abaningi nje bese udlulela iphakethe uhlelo imali eningi ngaphezulu. Ngokwesibonelo, "Superba". Kukhona inketho kulula ukusebenzisa World Wide Web.
Yini ebaluleke ababhalisile ukukhumbula
Uma une-tariff ubudala kanye nsizakalo azifaka kuwo, khona-ke ukushintsha imigomo yokusetshenziswa lenkampani akanawo kwesokudla ngaphandle kwesaziso kuwe njengoba lowo othola. Uzothola isaziso SMS. Uma ungenalo ukusebenzisa i-Inthanethi efonini yakho, ngisho inkonzo uxhumano engalethi wena ukulahlekelwa. Izinkampani nje awuphethe lutho lokukha sikukhokhise imali nyangazonke, okusho ukuthi izimali zakho avikelekile. Uma namanje nesithakazelo indlela cisha "MINIB" ukuze "MTS", bese uxhumane no-opharetha endaweni yangakini. Wayenekhono inkampani abasebenzi umakhalekhukhwini ngeke kuphela bakutshele ukuthi ongakhetha uxhume futhi yini value abo, kodwa futhi nokunikeza ongakhetha mnandi. Inketho "MINIB" ilungele labo ungayisebenzisi inthanethi efonini kaningi, kodwa kusuka nje ngezikhathi ezithile amasheke, isibonelo, i-imeyili noma ubheka ikhasi noma ezimbili inethiwekhi. Ezinye izindaba zika-abasebenzayo we-World Wide Web kufanele ufune ngaphezulu services value-added ukuthi uzosebenzisa Inthanethi kakhulu ngendlela ofuna. Yilokho udinga ukwazi ukuthi cisha zonke ezinye izinketho.